I-3 izixhobo eziyingozi omele wazi malunga neLean Six Sigma | IYO
I-3 izixhobo ezimangalisayo omele wazi malunga neLean Six Sigma
I-Lean Six Sigma ilungiselelo leendlela kunye nezixhobo zokutshintsha inkqubo. Yayiboniswa nguBill Smith ngenkampani esebenza kwi-Motorola kwi-1986. UJack Welch wenza into ebalulekileyo kwindlela yakhe yoshishino kwi-General Electric kwi-1995. Namhlanje, isetyenziswe njengenxalenye yamacandelo amaninzi.
Kukhangeleka ukuphucula uhlobo lomvuno wenkqubo ngokuhlukanisa nokukhupha izizathu zokungafezeki nokunciphisa ukunganyaniseki ekuhlanganiseni kunye neefom zezoshishino. Isebenzisa ilungiselelo lolawulo lwexabiso, ubuninzi bokuqwalasela, izicwangciso zobuqili, kunye nokwenza isikhokelo esingaqhelekanga sabantu ngaphakathi kwintlangano, abayiziingcali kwezi zicwangciso. Zonke iiSigma ezithandathu ziyakwandisa ngaphakathi kwintlangano ithatha emva kokuqulunqwa kwamanyathelo kwaye zihloniphekile, ngokomzekelo: ukunciphisa ixesha lokuphatha, ukunciphisa ukungcola, ukunciphisa iindleko, ukwandisa ukunyaniseka kwabathengi kunye neenzuzo zokunyuka. I-3 izixhobo ezimangalisayo omele wazi malunga neLean Six Sigma:
1. Ukuqeqesha kunye neZatifikethi ze-Sigma zeBlue Six
ISatifikethi seBlue Belt Overview
Uxanduva lwe-Yellow Belt
Uqeqesho olunjani olunikezelayo
UkuQeqesha ngokuQala kwiiNkcazo zeSigma ezithandathu.
Impembelelo yeBlack Belt Certification Kwimisebenzi Yakho
2. Ukuqeqesha kunye neZatifikethi ze-Sigma Green Belt
Isatifiketi seBlue Belt Overview
Indima ye-Sigtified Green Sigt Green Belt
Ukusetyenziswa Okufanelekileyo kwiBelt Training Training and Certification
Indlela iNkqubo Yethu ifanelana ngayo nomsebenzi wakho
3. I-Lean Six Sigma Black Belt Training & Certification
Isatifikethi seMatriki eBlack Belt
Indima ye-Six Sigma Black Belt eqinisekisiweyo
Six Sigma Philosophy yoPhuculo lweNkqubo
Ubungakanani beConan Six Sigma Black Belt Certification
"I-second-to-none" Iingcali zenkonzo zifumaneka ukuqinisekisa ukuba i-intanethi ye-Six Sigma Yellow Belt yokuqeqeshwa kwethu kwi-Intanethi iyaphawuleka. Ingaba silondoloza ukuba irekhodi lakho livulekile kuzo zonke iimeko okanye unemibuzo ngokubhekiselele kwi-Six Sigma Yellow Belt Certification yakho, uphumule ngokuqinisekileyo ukuba iThimba lethu lokuThengwa kwabathengi liya kukunika amandla okufumana amaninzi kumava akho e-intanethi.
I-Six Sigma Yellow Belt ilungiselela inikeza ukuqonda kwizicwangciso ze-Six sigma, imilinganiselo yayo kunye neendlela zokuguquka ezibalulekileyo. Ubhanti obomvu luqinisekisa ubungqina bendlela yokulungelelanisa iindlela ze-Six Sigma zokutshintshwa kwendalo kunye nezikhokelo ezixhomekeke kwixabiso ukwenzela ukuhlangabezana kakuhle neminqweno yabaxhasi kunye neenjongo ezijoliswe kuzo.
Ngokuqhelekileyo i-Yellow Belt inomsebenzi obalulekileyo wokufunda we-Six Sigma, kodwa ayikho inkokheli yodwa. Zihlala zijongene nokuqhubela phambili kweemephu zeenkqubo ukwenzela ukuqinisa ii-Six Sigma. I-Yellow Belt ithatha inomdla njengesikhungo esisebenza kunye nesihloko (SME) kwimisebenzi okanye imisebenzi. Ngaphezu koko, i-Yellow Belts ingasoloko ilawulwa yinkqubo eguqukileyo yokuguqulwa kwamashishini esebenzisa i-PDCA (icebo, Yenza, Hlola, umThetho). I-PDCA, esoloko ibhekiselwa kwi-Wheel Deming, ixhobisa i-Yellow Belts ukuhlukanisa iifom ezinokunceda ngenguqu. Ezi ziNtshontsho zeBlow Belt zanda ngokukhawuleza ziphakanyiswe kwizinga leGreen Belt okanye iBlack Belt apho inkqubo ye-DMAIC isetyenziselwa ukukhulisa imali yokugcina iindleko esebenzisa iStatistical Process Control.
I-Six Sigma Yellow Belt ilungiselela inikeza inkqubela ekusebenzeni ulawulo kunye nezixhobo ezibalulekileyo ze-Six Sigma, ukunika abasebenzi ithuba lokuqonda ngokubanzi, ukunika amandla wonke umntu ukuba anike uncedo olukhulu ekufezeni iindawo eziqhelekileyo zombutho. Isitifiketi sethu seSithupha Sigma Yellow Belt sinyuka phambili:
Ukwanela kwabameli kwi-bolster ingxenye yeSigma Six
Abasebenzi bathenga kwi-Six Sigma
Indawo yokusebenza yansuku zonke isebenza (kubangela ukwehla kwexesha lexesha, umgangatho ophuculweyo, kunye nenkunkuma encinci)
I-Yellow Belt iqokelela ulwazi, inxaxheba kwimisebenzi yokucinga ebalulekileyo kwaye idibanisa nokuhlangana kwayo kwinkqubo yophando. Akunjalo kuphela i-Yellow Belts iqokelela iimpawu ezibalulekileyo zokuqaphela, iskrini kunye nokulawulwa kwenzuzo yokutya kuxubusha kwiinkqubo zabo, nangona kunjalo zilungiswe ukuba zondle loo datha kwiBlack Belts kunye neBlue Belts ithatha udonga kwi-framework ezinkulu.
Qaphela: Akukho zinto zibalulekileyo kwiiprojekthi zethu. Ubuninzi bezinto oza kufunda kwiiNkqubo zeBlue kunye neBlue Belt zihanjiswe kwiNkqubo yeBlack Cert Programme. Naziphi na iimfuno ezifuna ukukhetha ngokukhawuleza kwi-Green Green okanye i-Black Belt Programs zincongo ukuba zenze njalo.
Iimodyuli ze-Yellow Belt ze-Sigma Online ze-Six Belt zilingana ne-American Society for Quality (ASQ). NjengoMgqibelo weSigma, awuyi kuba nempembelelo ekusebenzeni kwakho, kodwa ebomini bakho.
Iiprogram zezemfundo zoqeqesho ze-Sigma ze-Six Sigma ziQhathanisa nezoMgangatho we-American Society of Quality (ASQ) wokuqinisekisa isiGreen Belts. NjengeSigqeba se-Six Sigma Online Green graduate, awuyi kuphucula kuphela umsebenzi wakho, nangona utshintshe zonke iinkalo zobomi bakho. Bhalisa namhlanje uze ube yindlela yokufumana isatifikethi sakho seSitigu se-Six Sigma Green Belt kwimiba yomzuzwana.
I-Six Sigma Green Belt ilungiselela inikeza amalungu aphuculweyo ukucinga okubalulekileyo, ngokugqitywa kwi-DMAIC (Chaza, Ukulinganisa, Ukuhlalutya, Ukuphucula nokuLawula). I-Six Sigma Green Belt iqinisekisa umqeshwa ukuba abe ngumlingani olungiselelwe ngaphakathi kwendawo yakhe yamandla yombutho. Le nkcenkceso ivumela i-Green Belt ukuba iqhube phambili encinci, ibonakalise ngokubanzi imisebenzi ye-Six Sigma, engafuneki ngokusemthethweni umsebenzi wexesha elipheleleyo kwi-Black Belt kwi-Six Sigma yonke inhlangano.
I-Green Belt ineendlela ezimbini ezibalulekileyo: ukuqala, ukukunceda ngokugqithiseleyo ukuhambisa iinkqubo ze-Six Sigma, kwaye okwesibini, ukukhokelela utshintsho oluncinane luya ngaphakathi kwimihlaba ethile. Njengomntu onobuninzi, i-Green Belts inokwenza inxalenye ebalulekileyo yomthetho kwizentlalo yolwazi kunye nokuqhuba iimvavanyo ekuxhaseni iBlack Belt. Ziingcali ezenza utyalomali kwi-25% yamandla abo kwiimisebenzi ezithandathu ze-Sigma okanye zenkxaso yamashishini akwaBlack Belt. Phakathi kweCandelo le-Six Sigma Green Belt Training uza kuqonda indlela yokusebenzisa isigaba esiphezulu seSigma Six Sigma ezicwangcisekileyo ezicwangcisiweyo kunye nezixhobo ezilinganisekayo zokongeza kwimpumelelo yombutho wakho.
Ingaba kwiinkonzo zabantu, ingxowa, ukuhlanganisana, urhulumente, okanye olunye uhlobo lwezolawulo okanye imbono esekelwe kwimpahla ... Ukuqeqeshwa kwe-Six Sigma Green Belt kufezekileyo kunoma ubani othemba ukufumana uninzi lwazo kwi-vocation. Iziganeko ziya kufumana indlela yokusebenzisa iindlela ezinokulinganiswa zoshishino ukulungiselela utshintsho olunjenge:
Ulawulo lweProjekthi Ukusebenzisa i-DMAIC kunye ne-DMADV
Ukugxininiswa kwi "Define" kunye "Measure" Izigaba ze-DMAIC
Inkqubo yeNkqubo yokuPhatha nokuHlola
Qaphela: Akukho mfuneko kwiyiphi na iiprojekthi. Inxalenye enkulu yezinto oza kufunda kuzo kwiiprogram eziNgcini kunye neeBlue Green zihlanganiswe kwiNkqubo yeBlack Cert Programme. Naziphi na iimfuno ezifuna ukukhetha ngokukhawuleza kwi-Green Green okanye i-Black Belt Programs zincongo ukuba zenze njalo. Iimodyuli zezemfundo zeSigma ze-Six Sigma ze-Six Sigma Online kunye neeModyuli ze-Certification ze-Intanethi zilingana ne-American Society for Quality (ASQ). Njengomqeqeshi wokuQeqesha weBlue Belt u-Six Sigma, awuyi kuba nefuthe ekusebenzeni kwakho, kodwa kubomi bakho.
Iiprogram zezemfundo zoqeqesho ze-Sigma Black Belt ezi-Six Sigma zilingana ne-American Society for Quality (ASQ) yomgangatho wesatifikethi seBlack Belts. NgeSatifikethi seNigqeba esinguBatter Black Belt, awuyi kuba nefuthe ekusebenzeni kwakho, kodwa ebomini bakho. Six Sigma Online Black Belt Certification ingatshintsha ubomi bakho.
Ukuqeqeshwa kwethu kweSigqeba esiThathatshana esinguMathathu kunika ulwazi olunzulu lweendlela zeSigma zeengqiqo kunye nemigangatho (ukubala izikhokelo kunye nezixhobo ezixhasayo). I-Black Belt iqinisekisa ukuqonda ukulawulwa kweqela, ukuqhubela phambili kweqela, kwaye ngokuyimpumelelo idosa oogxa kunye neengxenye kunye nemisebenzi. Ukuqeqeshwa kweBlack Belt kudala ukuqonda ukugqitywa kwe-DMAIC imbonakalo ngokwemigangatho ye-Six Sigma, ukufunda okubalulekileyo kweengcamango zokubambisana, kunye nobuchule bokuchonga ngokukhawuleza "ukungabikho kwexabiso" kubandakanywa.
AmaBlack Belts ngokuyinhloko agxininise ekusebenziseni imisebenzi, nakuba i-Champions kunye ne-Master Black Belts igxininise ekuqwalaseleni imisebenzi kunye neZakhono ze-Six Sigma. I-Lean Six Sigma Black Belt yokulungiselela ilungiselela aba bantu izixhobo abanokufumana iSatifikethi esingu-Six Sigma Black Belt, esibalulekileyo ekubancedeni ukunyuka ngokumelene nenxalenye yabo njengenhloko kwi-six sigma kwinkqubo yabo. I-Six Sigma Black Belt ilungiselela ibonisa indlela yokulawula ukusebenza kweSigma Six Sigunyazisa ukuba baqonde ngokuthe ngqo kule mi sebenzi ngaphakathi kwintlangano yabo.
Amabhande amnyama amaninzi aya kubamba le ndawo iminyaka emibini kwisithuba esipheleleyo kwaye emva koko aya kubuya kwiimbopheleleko zabo zokuqeshwa emva koko. Bacebisa, badale, baholele, baphathe ulawulo lokukhawuleza kunye nabasebenzi ukuba bafezekise iinjongo zabo. Kufuneka ukuba balethe kwimisebenzi kunye ne-reserve money-stop stop-around $ 100,000 - $ 250,000.
Ingaba kwiinkonzo zabantu, ingxowa, ukuhlanganisana, urhulumente, okanye nayiphi na enye uhlobo lolawulo okanye ishishini elisekelwe kumashishini ... Ukuqeqeshwa kwe-Six Sigma Black Belt kufezekileyo kunoma ubani othemba ukufumana uncedo lwazo. Nazi ezinye zezinto oza kuzifumana ebhanti lakho elimnyama lilungiselela:
Icandelo elixhomekeke kumthengi
Ukufundisa amaqela asebenzayo ngokufanelekileyo
I-Amass / i-appraisal assessment
I-Youran Six Sixth Black Belt iya kuqinisekisa ukuba ulungele uku:
Sebenzisa kunye nokuqonda iimfuno zabaxhasi
Ukuphucula umgangatho wenkqubo yokugqithisa iimfuno zabaxhasi
Ukuhlukanisa ukwandisa kwaye ukhethe osebenza nabo
Sebenzisana nabathathi-makhonkthi ukwakha inkqubo ye-Six Sigma yokuthunyelwa
Hamba malunga neengcali zangaphakathi
Iinkokheli ezithandathu zeSigma
Lungiselela / ucebisi / umcebisi ngeeBlue Green kunye namaqela ophuhliso
Hamba malunga nokuvuselela inkqubo yenguqu
Amaqela ahlambeneyo anokuxhasa ngokuqhubekayo kunye neqhinga
Nika ingxelo kubaphathi